FIAROVANA NY ZAZA TSY AMPY TAONA : Nofanina ny mpanentana sy mpanao gazety
Nofanina tamin’ny herisetra mpahazo ny ankizy sy ny herisetra ataon’ny ankizy amin’ny fiarahamonina, ny zoma maraina teo, ireo mpanao gazety sy mpanentana fandaharana amin’ny haino aman-jery eto Mahajanga. 26 mars 2018
Tao amin’ny foibem-paritry ny mponina ao Mangarivotra no natao io fampiofanana io. Ny tambajotra miaro ny zon’ny ankizy sy ny ao amin’ny Fitsarana no nanofana ireo mpiserasera izay mivoy matetika ireo tranga ireo. Misy karazany roa ny herisetra mikasika ny olombelona latsaky ny 18 taona, dia ny mahazo azy sy ny ataony eny amin’ny fiarahamonina.
Manana anjara asa lehibe ireo mpanao gazety sy mpanentana ho fiarovana ny ankizy amin’ny herisetra, sy ny fiarovana ny zony, satria anatin’ny mpiaro ny olombelona katsaky ny 18 taona izy ireo . Manana andraikitra ihany koa fampahafantarana ny herisetra ataon’izy ireo eny amin’ny fiarahamonina sy fisorohana izany. Efa nisy ny fampiofanana ny sehatra hafa toy ny fokontany, ny tompona bars, dia izao indray anjaran’ireo mpanao gazety sy mpanentana fandaharana.
Tsy vitan’ny irery izao ady izao fa tsy maintsy iarahan’ny tompon’andraikitra rehetra ny mpitandro filaminana, Fitsarana. Ny talem-paritry ny serasera moa dia matoky fa ho vitan’ny mpanao gazety ireo lahasa maromaro miandry azy ireo. Marihina moa fa nahitam-pidinana ny tahan’ny herisetra atao amin’ny ankizy tamin’ity taona ity raha mitaha tamin’ny herintaona.